How I understand “EQ” – Aung Pyae Phyo – Medium
Founded @MM-Digital-Solutions & @PADCMyanmar
How I understand “EQ”
Photo by Sergio Rola (https://unsplash.com/photos/4aQY2CrXsa8)
ဟိုတလောက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တော့ မေးတယ် ။ RS မှာ အဆင်ပြေဖို့ အတွက်ဆိုပြီး ဟန်ဆောင်သင့်သလား ။ ကိုယ့် ခံစားမှုကို ဖုံးကွယ်ထားသင့်သလား တဲ့ ။
အခုလဲ ဆရာသမား တစ်ယောက်က EQ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ခံစားချက်ကို ဖုံးရဖိရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူနဲ့ မကိုက်ကြောင်း ရေးထားတာတွေ့ရတယ် ။
သူနဲ့ မကိုက်တာကတော့ သူ့ကိစ္စပေါ့လေ ။ အဓိက ပြောချင်တာက စိတ်ခံစားချက်ကို ဖုံးဖိတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါ ။ ကျွန်တော်ကတော့ EQ ကို စိတ်ခံစားချက်ကို ဖုံးရဖိရတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကို လက်မခံပါဘူး ။ EQ ဆို "အခြေအနေ တစ်ခု" မှာ "ကိုယ့်ရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်" ကို "စီမံခန့်ခွဲနိုင်တာ" လို့ ကျွန်တော်က မြင်ပါတယ် ။
ကြုံရတဲ့ အခြေအနေ အပေါ်မှာ ပြုလုပ်လေ့ရှိ ကျွန်တော်ရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ နဲ့ အနာဂတ်အခြေအနေ ဆိုတာကို ဖန်တီး (create) ပါတယ် ။
ယေဘူယျ အရ ဆိုရင် စိတ်သဘောထား ကောင်းတဲ့ လူက ကောင်းသလို တုန့်ပြန်လေ့ရှိပြီး စိတ်သဘောထား သေးသိမ်တဲ့ လူက သေးသိမ်သလို တုန့်ပြန်လေ့ရှိတယ် ပဲ ပြောရမှာပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ၁၀၀% မမှန်ပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ ကိုယ်စိတ်ကြည်နေတဲ့ အချိန် စိတ်မကြည်နေတဲ့ အချိန်ဆိုတာလဲ ရှိနေသေးတော့ ကိုယ့်စိတ်မှာရှိတဲ့ အခံ အခြေအနေ ကလဲ ကိုယ့်ရဲ့ တုန့်ပြန်ချက် ကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ လွှမ်းမိုးတယ် လို့ ဆိုရပါမယ် ။
အဲဒီတော့ ခုနက ပြော ခဲ့တာကို ပြန်ကောက်ရရင်
၁) ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေက ကျွန်တော်တို့ အနာဂတ် အခြေအနေတွေကို ဖန်တီးတယ် ။
၂) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တုန့်ပြန်မှု တွေက အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါ အပေါ်မူတည်ပြီး ကောင်းတဲ့ (လိုချင်တဲ့ အကျိုးရလဒ်ထွက်စေမဲ့) တုန့်ပြန် မှု လုပ်မိတဲ့ အခိုက်အတန့်ရှိသလို မကောင်းတဲ့ (မလိုချင်တဲ့ အကျိုးရလဒ်ထွက်စေမဲ့) တုန့်ပြန်မှု လုပ်မိတဲ့ အခိုက်အတန့်လဲ ရှိတယ် လို့ ကောက်ချက်ချ လို့ရပါမယ် ။
အဲဒီ့ ကောက်ချက် အရဆိုရင် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေလေ့ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်တွေ ကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ အကျိုးရလဒ် ရဖို့မရဖို့က မသေချာဘူး ဆိုတဲ့ သဘော ဖြစ်မနေဘူးလား ။
ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းရဲ့ သဘောထားအရသာပြောရမယ် ဆိုရင် လုပ်ဖို့ လိုအပ်တာတွေ အကုန်လုပ်မယ် အဲဒီလိုလုပ်တဲ့ အရာတွေကြောင့် ရလဒ်ထွက်လာတဲ့ အခါကျရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ထွက်လာတယ် ဆိုတာကိုပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ် ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရလဒ် မထွက်ဘူး ဆိုတာ လက်မခံနိုင်စရာ ပါပဲ ။
ဒီတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရလဒ် ကျိန်းသေပေါက်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ။
"ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားမယ် ဖြစ်လာတာ မဖြစ်လာတာတော့ ကံပဲ" ဆိုတဲ့ လူမျိုးဆိုရင်တော့ ဒါတွေ ဘာမှ သိပ်စဉ်းစားနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး ။ "ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက်" ဆိုတာလေးတွေ လုပ်ရင်း ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်ကို ကျေနပ်နေပေါ့လေ ။
အဲလိုမှ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရလဒ် ကျိန်းသေရမှ ဖြစ်မယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဒီရလဒ်မျိုး ကျိန်းသေထွက်မဲ့ တုန့်ပြန်မှုမျိုး ၊ လုပ်ဆောင်မှုမျိုးတွေဟာ ဘာတွေလဲ ဆိုတဲ့ နေရာကနေ စပြီး စဉ်းစားရပါတော့မယ် ။
ဒါကို result oriented ဖြစ်တယ် လို့ သတ်မှတ်ကြောင်း Dr. Steven R. Covey ရဲ့7Habits of Highly Effective People စာအုပ်ထဲက Be Proactive ဆိုတဲ့ sectionမှာ မှတ်သားဖူးပါတယ် ။ အကျယ်သိချင်ရင် အဲဒီစာအုပ်ရဲ့ Audio Book ကျွန်တော့်ဆီက တောင်းယူ နားထောင် ကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
အဲဒီတော့ ခုနက ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို EQ ရဲ့ definition ကို "အခြေအနေ တစ်ခု" မှာ "ကိုယ့်ရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်" ကို "စီမံခန့်ခွဲနိုင်တာ" ဆိုတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်မယ် ဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ဘာဆက်ပြောလို့ ရလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အခြေအနေတစ်ခုကို တုန့်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုရင် စိတ်ခံစားမှုကို အဓိကထားတဲ့ emotional reaction တွေ အလျင်စလို မလုပ်ဘူး ၊ ခဏဖြစ်ဖြစ် pause မယ် ပြီးတော့ ကိုယ်လုပ်တော့မဲ့ တုန့်ပြန်ချက်က ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရလဒ် ထွက်စေမဲ့ တုန့်ပြန်ချက်မျိုး ဟုတ်သလား ဆိုတာကို ခဏဖြစ်ဖြစ် စဉ်းစားမယ် ဆိုတာလောက်အထိ အဓိပ္ပါယ်ကို ဆွဲဆန့်လို့ရမယ် ထင်ပါတယ် ။
ဟုတ်ပြီ အခုလို စိတ်ခံစားချက်က လာတဲ့ တုန့်ပြန်မှုမျိုးတွေ မလုပ်ဘူး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အကျိုးရလဒ်ထွက်စေမဲ့ တုန့်ပြန်မှုမျိုးကို ပဲ လုပ်မယ် ဆိုတော့ ထောက်စရာ ၂ ချက်ရှိလာပါတယ် ။
ပထမတစ်ချက် ဒီလိုသာဆို ဒီ တုန့်ပြန်မှုက ဒါ real မဟုတ်ဘူးပေါ့ ။ fake ကြီး artificial ကြီးပေါ့ လို့ ပြောကြတယ် ။ သတ်မှတ်တဲ့ သဘောက စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာသလို တုန့်ပြန်တာကမှ အစစ်အမှန် real ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့လေ ။
ဒါဆို ဒေါသကြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်က သူ့စိတ်ထဲက ဖြစ်လာသလိုပဲ အမြဲ အရာတိုင်းကို ဒေါသတကြီး တုံ့ပြန်သင့်သလား ။ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြောတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကရော အမြဲ စိတ်ထဲရှိသလို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပဲ ပြောနေသင့်သလား ။ မဆင်ခြင်သင့်တော့ဘူးလား လို့ ပြန်မေးရမယ် ။
အမှန်တော့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ထဲမှာ အရမ်းဆိုးဝါးတဲ့ အရာတွေဆိုရင် မလုပ်မိအောင် ပြန်ထိန်းပေးတဲ့ အရာ က နဂိုကတည်းက ရှိနေပြီးသားပါ ။ အဲဒါကို "ဆင်ခြင်တုံတရား" လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ အဲဒီ ဆင်ခြင်တုံတရား နဲ့ ထိန်းလိုက်လို့ ဆိုးဆိုးရွားရွား ကိစ္စတစ်ခုခု မလုပ်မိတဲ့အခါ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ fake လို့ မခေါ်ပါဘူး ။
ခုနတုန်းက ပြောခဲ့တဲ့ EQ ဟာလဲ ဒီသဘောပါပဲ ။ ကွာခြားတာဆိုလို့ ဆိုးဆိုးရွားရွား ကိစ္စတွေမှသာ မလုပ်မိအောင် ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ထိန်းချုပ်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဘယ်ကိစ္စ ကိုမဆို ကိုယ်မလိုချင်တဲ့ ရလဒ်မထွက်လာစေဖို့ မလုပ်ရမဲ့ အရာတွေကို မလုပ်ဘဲ သည်းခံတာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ထွက်လာစေဖို့ လုပ်ရမဲ့ အရာတွေကို လုပ်ဖြစ်သွားအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တာဝန်ယူတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုယ့်တုံ့ပြန်မှုကို ကိုယ်တာဝန်ယူတာဟာ fake လုပ်တာ မဟုတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဉပမာပေးရရင် ကိုယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါ စပ်တဲ့ အရသာထွက်ဖို့အတွက် ငရုပ်သီးထည့်ရပါမယ် ။ ဒါကိုစိတ်ထဲမှာ ငံပြာရည်ပဲ ထည့်ချင်နေတယ် ဆိုပြီး ငံပြာရည်ထည့်မယ် ဆိုရင် စပ်တဲ့အရသာလုံးဝထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ စပ်တဲ့အရသာထွက်ဖို့ စိတ်ထဲက ဘာပဲ ထည့်ချင်နေ ထည့်ချင်နေ ငရုပ်သီးထည့်တာဟာ fake တာလား လို့တောင် ပြန်မေးရမလို ဖြစ်နေပြီ ။
ဒုတိယ ထောက်စရာ တစ်ချက်က Moral Quality ပါ ။ ဉပမာ စာမေးပွဲ အောင်ချင်တယ် ။ ဒါပေမဲ့ ခိုးချမှ အောင်မယ် ဆိုတာမျိုး ဆိုရင်တော့ အကျခံလိုက်မယ် ဆိုတာမျိုး ။ ပြောရရင် EQ နဲ့ Moral Quality နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး ။ EQ က ကိုယ်လိုချင်တာရဖို့ ဘာမဆို လုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မှ မဟုတ်တာ ။ EQ က ကိုယ့်တုံ့ပြန်ချက် ကိုယ့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကိုယ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ် ။ စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်လာသလို အတိုင်းကြီးပဲ တုံ့ပြန်နေစရာ မလိုဘူးလို့ပဲ ပြောတာပါ ။
ကိုယ့်တုံ့ပြန်မှု (reaction) ကို မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ လူတွေက အဲလိုမျိုး ထိန်းချုပ်နိုင်တယ် အလျင်စလို မတုန့်ပြန်မိအောင် သည်းခံနိုင်တယ် ဆိုရင်ပဲ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ဖို့အတွက် ဘာမဆို လုပ်တော့မှာပဲ ဆိုပြီး ဝါးလုံးရှည်ကြီးနဲ့ ရမ်း သတ်မှတ်တာမျိုးပါ ။ အမှန်ဆို ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်ကိုယ် သည်းခံနိုင်တဲ့ လူကမှ ကိုယ့် Moral Quality အတိုင်း အတိအကျ တုန့်ပြန်နိုင်တာ ဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် ။
စာမေးပွဲအောင်ချင်သူအတွက် EQ ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်က စိတ်ထဲထင်သလို လျောက်မလုပ်ခင် ဘယ်ဟာလုပ်ရင် စာမေးပွဲအောင်မယ် ဆိုတာ အရင် လေ့လာဉီး ။ ပြီးလို့ လုပ်ရမဲ့ဟာကို သေချာသိပြီဆိုမှ အဲဒီလုပ်ရမဲ့ အရာအတိုင်း တသွေမတိမ်း လုပ် ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ ။
လုပ်ရမဲ့ဟာက ကိုယ့် Moral Quality ကို ထိခိုက်မဲ့ဟာမျိုးဆိုလဲ မလုပ်ဘဲနေလိုက်ရုံပါပဲ ။ EQ ရှိတဲ့ လူက reaction ကို ရွေးချယ် နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် ။
အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ဘဝ သိသိသာသာ အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရနိုင်ဖို့ အာမခံချက်ရှိဖို့ အတွက် -- "အခြေအနေ တစ်ခု" မှာ "ကိုယ့်ရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်" ကို "စီမံခန့်ခွဲနိုင်တာ" -- ဆိုတဲ့ EQ ဟာ မဖြစ်မနေကို လိုအပ်ပါတယ် ။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ကောင်းတွေ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ RS လဲ ပါပါတယ် ။ ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်အတိုင်း မစဉ်းစား မဆင်ခြင်ဘဲ အလျင်စလို တုံ့ပြန်တတ်တဲ့ စရိုက်ကို တတ်နိုင်သမျှ ဆင်ခြင်ပြီး ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ ပုံစံ မျိုး ဖြစ်လာစေမဲ့ အပြုအမူမျိုးတွေကိုသာ ရွေးချယ်ပြီး လုပ်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင် သာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ RS တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ လဲ Chance လဲ ပိုသာလာမှာဖြစ်ပါတယ် ။
Like what you read? Give Aung Pyae Phyoaround of applause.
Never missastory from Aung Pyae Phyo, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from Aung Pyae Phyo